Lahatsoratra | Page 40 of 40 | Fondation des Choisis de Jésus
3A_40: Anaka, mirehi-pitiavana ho anao ny Foko, ary mangetaheta fiombonana feno aminao Aho. Tena sarobidy amiko izay Andriamanitrao, ianao. Mila anao Aho, fa ny tena faniriko dia ny hahita anao tena akaiky ny Foko. Mananafitiavana betsaka Aho izay tiako harotsaka ao anatinao, avelao ho feno ianao. Ry zanaky ny Foko, tiako ianao.
2A_35: Ry Bitikako, tohizo ny fandraisanao ny Fitiavako, amin’ny fiaikenao fa bitika ianao ; ny fanaovanao izany no mahafaly Ahy indrindra aminao, satria manana Fitiavana betsaka dia betsaka omena anao Aho, mba hatongavanao ho olona feno sy mamirapiratry ny Fitiavako. Tiako tokoa ianao.
2A_06: Anaka, aoka ho tsapanao fa ny Fijaliako nandritran’ny fialako aina tao amin’ny zaridainan’oliva no nampamokatra ny Iraka nanirahana Ahy sy ny Fahafatesako. Raha tsy maintsy nomasahana tamin’ny fijaliako ny iraka nankininina tamiko, koa tsy rariny ve raha ny fijalianao dia tonga nampamokatra ny asa nanirahana anao ?
1A_13: Anaka, ekeo ny tenanao. Ilaiko ianao araka ny maha ianao anao izao. Ny fanaikenao ny tenanao izao no afahanao mandray ireo fahasoavana, Fahasoavana maro izay eo am-pelatànako ho anao.
1A_18: Anaka, atolory Ahy mandrakariva ny fahalemenao. Ianao, raha amin’ny herinao ihany dia tsy misy dikany ; Izaho no fahataperana! Ekeo ny maha ianao anao ary ekeo ny maha Izaho Ahy. Amin’izay dia ho afaka manatanteraka zava-mahagaga ao aminao sy amin’ny alalanao Aho. Avy amin’ny alalan’ny fahalemenao indrindra no iamparan’ny Heriko.
1B_10: R’ilay Bitikako, tohizo ny mamerina miteny Amiko ireo « ENY-NAO » amin’ny antsipirihan’ny fiainanao. Fantaro fa raha ianao irery ihany dia tsy havita na inona na inona ianao. Ny Fitiavana no afaka manao ny zavatra rehetra, ny Fitiavana no nandray anao tamin’ny toerana nisy anao : tahaka an’i Davida mpandroaka ondry izay voahosotra ho Mpanjaka. Tiako atao ho andry iankinan’ny Egliziko ianao.